FAO: « Tsy avela hiteraka hanoanana ny Covid-19 » | NewsMada
FAO: « Tsy avela hiteraka hanoanana ny Covid-19 »
Namoaka fanambarana ny Fikam­banana iraisam-pirenena misahana ny sakafo (FAO). Aminy mila arovana ny fizotry ny lalam-pihariana amin’ny lafiny sakafo mba tsy ho simban’ny krizy ateraky ny covid-19 mitranga amin’izao fotoana izao. Miantraika amin’ny toekarena maneran-tany ny fepetra fijanonana any an-trano mba ts hiparitahan’ny Coronavirus, nefa manampy trotraka izany koa ny olona maty aterany. Mihena ny vokatra satria tsy afaka miasa ny mpamokatra, tsy tonga any amin’ny mpanjifa ny sakafo mikatona ny sisin-tany. Tsy ampy ny zezika, ny fanafody hamonoana ny bibikely manimba ny zavamaniry. Mihena koa ny tinady satria maro ny toera-pisakafoana sy ny mpivarotra tsy maintsy nakatona.
Mba hampihenana izany tsy fa­hampian’ny sakafo izany, manaitra ny rehetra ny FAO fa tokony ahena araka izay azo atao ny fahatapahan’ny lalam-pihariana mikasika ny sakafo, miainga any amin’ny famokarana, ny fanodinana, ny fitaterana, ny varotra mipaka any amin’ny fanjifana.
Tokony arindra daholo ny sehatra voakasika rehetra eran-tany, mba tsy ho sahirana ny fahitana sakafo. Tsy tokony hikoropaka ny mponina.
Efa nisy krizy ara-tsakafo ny taona 2007 sy ny 2008, ka niteraka olana indrindra ho an’ny tokantrano kely fidiram-bola. “Tokoa hakana lesona izany mba tsy hiverenan’ny olana intsony amin’izao tranga covid-19 izao”, hoy ihany ny FAO.